Coral Reef: ရေမြေခြားက အဆောင်သားများ
Ree Noe Mann said on April 30, 2010 at 10:54 PM
ဖတ်လို့ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ရှိသေးရင် ထပ်ရေးပါအုံး
nyimuyar said on May 1, 2010 at 7:17 AM
wow nice essay, good to read
ချစ်ကြည်အေး said on May 1, 2010 at 9:26 AM
ကျွန်းသားမို့ မြို့ကလူတွေလောက် မယဉ်ကျေးပါဘူးတဲ့
ဟားဟား ညီမဇွန်ရေ တော်တော် ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းပြချက်ပါပဲ...။ အဆောင်နေရတာ ပျော်စရာ၊ စိတ်ညစ်စရာ၊ ခုလိုဝေးသွားတော့မှ လွမ်းမောစရာလေး ဖြစ်ကျန်ရစ်တာနော်....
Rita said on May 1, 2010 at 12:44 PM
(ကျွန်းသားမို့ မြို့ကလူတွေလောက် မယဉ်ကျေးပါဘူးတဲ့။)
ကိုယ်လည်း အတော် သဘောကျမိတယ်။ အဲဒီဆင်ခြေကို... တော်တော်တော့ ပွင့်လင်းသားပဲ။
အင်ကြင်းသန့် said on May 1, 2010 at 7:51 PM
ဖတ်လို့တကယ်ကောင်းတယ် မမ...ကုန်ပြီလား...အတွေ့အကြုံတွေ ကျန်ဦးမယ် ထင်ပါတယ်...ရှိသေးရင် မျှဝေပေးပါဦးနော်...
sonata-cantata said on May 2, 2010 at 11:27 AM
ဇွန် ပို့စ်လေး ဖတ်ပြီး ကျောင်းတက်တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေ သတိရသွားမိတယ်။
ပထမနှစ်စ တုန်းကပေါ့ ရှမ်းပြည်လို အေးချမ်းတဲ့ဒေသကနေ ရန်ကုန်လို ပူအိုက်တဲ့နေရာမှာ စာလာသင်ရတော့ အတန်းထဲမှာ ချွေးဒီဒီကျကြရှာတဲ့ သူတို့အဖြစ်။ လက်ကိုင်ပုဝါလောက်နဲ့ သုတ်မနိုင်ရှာတော့ တဘက်ပုဝါတွေကို ဆောင်ထားကြရတော့တာ...။
မသီတာက ပဲများပြီး ခေါင်းစည်းပုဝါစည်းတာကို နောက်ချင်တော့
သူတို့က မျက်နှာသုတ်ပုဝါကြီးတွေ ခေါင်းပေါင်းပေါင်းကြတယ်း)
မမင်း said on May 2, 2010 at 10:25 PM
အာ ... ပို့စ်ကောင်းတွေ အများကြီးတင်ထားတာပဲ။ ဖတ်ရင်းနဲ့ အရှိန်တက်လာပြီ... ရှေ့ဆက်သွားလိုက်ဦးမယ်။ ကျေးဇူးပဲ မဇွန်ရေ၊ စာမဖတ်ဖြစ်တာကြာလို့ ဘာလိုအပ်နေမှန်းမသိတာ၊ ခုလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကောင်းကောင်းလေးတွေ ဖတ်ရတော့ သိပ်ပြီး စိတ်ကျေနပ်သွားမိတယ်လေ။
Anonymous said on May 3, 2010 at 1:31 PM
Coral Reef ရဲ.စာတွေကိုအရင်ကတခါမှမဖတ်ဖူးခဲ.ပါဘူး။
အခု ၀ီရှီမီဘလော.ဂ်ကနေတဆင်. “ရေခြားမြေခြားကအဆောင်သားများ”ကိုပထမပို.စ်ကိုဖတ်ဖူးတာပါ။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကြောင်းအရာတွေ၊ ဘာမှအရေမရအဖတ်မရတာတွေထက်စာရင်အဲ.လို ရေခြားမြေခြားက ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ.ရတဲ. အတွေ.အကြုံလေးတွေကိုရေးပြထားတာ ဗဟုသုတလဲရစေပါတယ်။
An Asian Tour Operator said on July 27, 2010 at 12:36 PM
အမှတ် မထင် ရောက်လာတယ်။ ဖတ်ကြည့် တယ်။ ပို့စ် တခု ကနေ တခု ဖတ်မိအောင် ဆွဲခေါ်သွား တယ်။